Kordhinta Instagram iyo Waxa ay u qaban karto ganacsigaaga ▷ ➡️ Kuwa raaca ▷ ➡️
Kordhinta Instagram iyo waxa aad ku sameyn karto ganacsigaaga
December 19, 2018 0 comments 1168
Tan iyo 2010, Instagram wuxuu cadeeyay inuu yahay habka ugu dhaqsaha badan ee warbaahinta bulshada ee kobcaysa! Waxay leedahay saldhiga isticmaale ee qiyaastii 300 milyan waxaana la filayaa inuu kordho. Marka muxuu ugu muuqdaa codsigan fudud inuu si dhakhso leh u korayo? Waa maxay sababta kor u kaca this ee Instagram? Hagaag, dhammaantood waxay ku soo dhacayaan hal-abuurnimo. Instagram Wuxuu helay habab cusub oo lagula wadaago waxa ku jira aaladdiisa isla markaana ka dhigaya isticmaaleyaasha khibrad dheecaan dheeri ah. Tusaale ahaan, sheekooyinka Instagram ayaa la siidaayay si ay ula tartamaan snapchats, taas oo u oggolaaneysa dadka isticmaala inay soo bandhigaan sawirro ama fiidiyooyo baaba'aya.
Miyey sahlan tahay sax? Hagaag taasi waa sababta. Instagram hadda waxay saameyn dheeraad ah ku leedahay dhammaan isticmaaleyaasheeda kuwaasoo laga yaabo inay u adeegsanayeen Snapchat iyagoo la shaqeynaya codsigooda, taas oo yareynaysa baahida loo qabo in la isticmaalo labadaba isla markaana loo gudbiyo isticmaaleyaashan adeegyadooda.
Xeeladdan dagaalku waxay noqotay mid lacag badan bixisay, maadama Instagram-ku ay ka sareysay dadka isticmaala Snapchat. Sheekooyinka Instagram sidoo kale waxay dhiirigelinayaan isweydaarsiga ugu weyn ee content waxayna siinayaan arjigaaga sheeko wada sheekeysi, taasoo kuu oggolaaneysa inaad kula tartamto dhammaan aaladaha kale ee fariimaha tooska ah. Cusbooneysiinta sidan oo kale ah waa sababta koritaanka degdegga ah ee Instagram.
Ma rabtaa inaad ogaatid sida loo helo liiska kuwa raacsan?
Waa maxay xanaaqyadaani oo dhan?
Instagram waa dalabka ugufiican ee lala wadaago waxa kujira muuqaallo muuqaal ah. Dadweynahu waa da 'yar yihiin, wax bartay oo aad u xiiseeya wax adeegashada. Tani waxay ka dhigeysaa nuxurka mid abuur leh, xiiso leh oo dhakhso leh. Waxay leedahay dareen ka duwan kan aaladaha sida Facebook iyo Twitter, iyada oo diirada la saarayo waxyaabaha muuqaalka ah halkii ay ka isticmaali lahaayeen ereyada. Si kastaba ha noqotee, daraasado ayaa muujiyey, sida Facebook, in loo isticmaalo maalin kasta, taas oo ka dhigaysa mid aasaasi ah oo saldhig u adeegsada macaamiisha.
Awoodda lagu qabanayo dhagaystayaasha da'da yar iyo kuwa hal abuurka leh ayaa qeylo dhaan ka muujinaya shirkadaha waaweyn ee doonaya inay xayeysiiyaan shabakadaha bulshada. Isticmaal sare, waxaa hubaal ah inay jirto xiiso weyn oo ku saabsan xayeysiinta dalabka. Si kastaba ha noqotee, tartanku wuxuu noqon doonaa mid qaan gaadha oo shirkaduhu waa inay raadiyaan habab hal abuur leh oo looga gudbo xafiiltanka ay la leeyihiin dunida muuqaalka ah ee shabakadaha bulshada.
Sidee loogu adeegsan karaa suuq geynta?
Dabcan, haddii aad rabto inaad tan u isticmaasho inaad ku suuq geyso shirkaddaada ama badeecad, markaa waa inaad tixgelisaa sida. Kordhinta 'Instagram' waxaa la bixiyaa maxaa yeelay waa madal muuqaal ah, sidaa darteed, badeecada guud ahaan way ka fududdahay suuqa in ka badan adeegyada. Laakiin adeegyadu suurtagal maahan in la dardar geliyo dalabka, maadaama ay heli doonaan habab xiiso leh oo adeeggooda u soo jiida nolosha isla markaana soo jiidan doona dareenka isticmaalaha Instagram.
ka hashtags waxaa badanaa lagu isticmaalaa gudaha Instagram Iyo helitaanka isbeddelada ama xitaa ka bilaabashadaada waa hab hubaal ah oo lagu soo jiito dhagaystayaasha, oo la mid ah Twitter. Si kastaba ha noqotee, qofku waa inuu taxaddar ku sameeyaa inuu isbarbardhigayo hashtag-ka iyo muuqaalka muuqaalka ah ee uu bixiyo, sidaa daraadeed uma fududa sida codsiyada kale ee adeegsanaya farsamadan.
Instagram inta badan waa codsi wareega, sidaa darteed Nuxurku waa inuu ahaadaa mid si sahlan loo aqrin karo loona cusbooneysiin karo mobilada.. Kaliya waxyaabaha cusub ee cusub ayaa soo jiidan doona dareenka.
Ugu dambeyn, Sheekooyinka Instagram Iyagu waa hab fiican oo lagula macaamilo dhagaystayaashaada, oo soconaya kaliya 24 saacadood. Sheekooyinka waa in loo adeegsadaa si loogu ilaaliyo macaamiisha mustaqbalka maalinba maalinta ka dambaysa ganacsigaaga iyo in loo muujiyo waxa ka dambeeya masraxa si uu adeegsaduhu u dareemo qayb ka mid ah shirkadda.
Instagram waxaa loo adeegsan karaa in lagu suuqgeeyo wax kasta, oo leh maskax hal abuur leh iyo koox go'an, waxaad abuuri kartaa dhawaaq badan oo ku xeeran astaantaada! Sidoo kale waad arki kartaa tirakoobka Instagram.
Iyada oo dhagaystayaal da 'yarta ah iyo kuwa wax bartay ay adeegsadaan arjiga taleefannadooda maalin walba, waxaad saadaalin kartaa oo keliya in kor u qaadista instagram-ka ay sii jiri doonto iyo daacadnimada isticmaaleyaasheeda. Waxaa jiri doona fursad sii kordheysa oo loogu adeegsan karo codsigan ujeeddooyin ganacsi. Taladuna waa inay gasho inta ay moodada tahay! Kaliya way sii weynaan doontaa, sidaa darteed waxay geli doontaa suuqa ka hor intaysan xitaa buuxin. Sidoo kale, maanta waad awoodid soo iibsato barta Instagram si kor loogu qaado astaantaada ka dibna adeegso dhammaan talooyinkan.
1 Kicitaanka Instagram
1.1 Waa maxay sababta?
1.2 Waa maxay xanaaqyadaani oo dhan?
1.3 Sidee loogu adeegsan karaa suuq geynta?
Ma u isticmaashaa Instagram ganacsi?
Siyaabo wax ku ool ah oo lagu helo taabba gal badan barta Instagram